Tambajotrana halatra moto Saron’ny polisy tany Toamasina ny atidoha
Fanafihana « CASH POINT » Ampefiloha « Efa vita tetika mialoha ny tifitr’ireo jiolahy mpandroba»
Tifitra in-telo no nahazo ilay lehilahy raha vao niala ny môtô izay nanaterany ny vadiny sy ny sakaosy nisy vola hampiasaina amin’ny toeram-pandraisana sy fametrahana vola manoloana ny efitrano fidiovam-bahoaka manamorona ny lalamby Ampefiloha.
Asan-jiolahy eto Iarivo 6 hetsy no vidin’ny basy iray
Tra-tehaka ny mpivarotra basy poleta sy bala efatra izay mbola anaty fonony.
Mpanendaka teny 67Ha Nofandrihan’ny polisy miendrika sivily
Lehilahy roa no voasambotry ny polisy miasa ao Isotry ny sabotsy 19 oktobra teo teny amin’ny faritra CENAM 67ha iny tamin’ny
AMBODIN’ISOTRY Voasambotra ny mpanendaka mpamerin-keloka
Miandrandra fanavaozana ny lalàna fanafaizana ireo mpamerin-keloka ho fitandroana ny fandriampahalemana ny mpanara-baovao. Nandritra ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana no fantatra fa efa mpamerin-keloka ireo roalahy avy eny Ambodin’Isotry nifanenjehana ka voasambotry ny polisy teny 67ha.
Talatamaty Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô
Tsy an-kijanona intsony lozam-pifamoivoizana izay mahafaty ny mpandeha moto. Omaly dia nisy iray hafa indray namoy aina tetsy Talatamaty.
Zandary mamo nitifitra tamin’ny basiny Divi-janahary no tsy nahavoa ilay tovolohy
Karohina ilay manamboninahitra izay “commandant de compagnie” teo aloha tao Ampanihy-Andrefana voalaza ho nanaotao foana ny talata teo.
AMBATOMARO Mpifoka rongony nifanenjehan’ny polisy
Vao nahita ireo mpitandro filaminana ireo mpifoka rongony eny Ambatomaro dia nirifatra nitsoaka.
Nahazo vahana ny halatra moto tao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana tato ho ato. Olona miisa efatra no voasambotry ny polisy miasa ao Toamasina ny 21 septambra teo.
Ny sabotsy 14 septambra teo dia nisy ny fitarainana voarain’ny polisy tao Andranomadio, mahakasika ny vaky trano izay niseho. Nanao ny fanadihadiana izy ireo ka hita nivezivezy tao an-tanànan’i Toamasina ny moto iray nangalarina tao amin’io trano io. Narahin’ny polisy izy io ka hitany ny toerana nisy azy. Moto miisa enina no hita tao ary lehilahy miisa roa no voasambotra tao avy hatrany. Ireo roa ireo no mpanao vaky trano, ny iray hafa kosa mpiray tsikombakomba ary mbola misy iray mpividy ireo moto halatra. Manezaka araka izay tratrany ireo mpitandro filaminana fa efa mampikolay ireo mponina ny hamaroan’ireo olon-dratsy ao Toamasina izay anisan’ireo faritra mena amin’ny halatra sy ny fanafihana mitam-piadiana tahaka ny eto an-drenivohitra sy ny fôrôsin’Antsiranana ary ny asan-dahalo amin’ny faritra Atsimo sy Andrefan’ny Nosy.